मु’द्दा जितेका पत्रकार अपिल त्रीपाठीलाई टेलिकमले पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यो!के लापरबाही बाहिर ल्याउनु ग’लत थियो?अपिल त्रीपाठीको पक्षमा हुनेले शेयर गरौं।
October 1, 2020 adminLeaveaComment on मु’द्दा जितेका पत्रकार अपिल त्रीपाठीलाई टेलिकमले पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यो!के लापरबाही बाहिर ल्याउनु ग’लत थियो?अपिल त्रीपाठीको पक्षमा हुनेले शेयर गरौं।
पोखरा । गण्डकी टेलिभिजनमा कार्यरत एकदमै कुशल एवम् चर्चित पत्रकारद्वय अपिल त्रीपाठीले झन्डै ३ बर्ष अघि नेपाल टेलिकमको लापरबाहीको बारेमा जनतामाझ छर्लङ्ग नै पारिदिएका थिए । टेलिकमले पत्रकार’लाई त त्यस्तो झुक्याउने रहेछ अन्य सर्वसा’धारणलाई कस्तो गर्दा भनेर चर्को आ’लोचना नै भएको थियो।
त्रीपाठीले टेलीकमले गरेको त्यस्तो लाप’रबाहीलाई बाहिर ल्याए सँगै उनलाई नेपाल टेलिकमले पोखराबाट नै मुद्दा दायर गरेको थियो तर पोखराको उच्च अदालतले त्रीपाठीलाई सफाई दिएका थिए । उनले मुद्दा जितेका थिए र टेलिकमले हारेको थियो ।
पत्रकार त्रिपाठी पोखराको गण्डकी टेलिभिजनमा दशक भन्दा बढीबाट नै कार्यरत छन् । अहिले उनको चर्चित कार्यक्रम गण्डकी छड्ने नहेर्ने कमै मात्रमा होलान् । त्रिपाठी सदैव गण्डकी छड्के मार्फत व्यथितिहरुलाई पर्दाफास गर्नेतफर्फ केन्द्रीत भएर नै सबैको कसिङ्गर बनेका छन् ।
उनलाई सकारात्मक मनहरुले अनेकौं प्रशंसा देखि लिएर हौसलाहरु प्रदान गर्दै आएका छन् । उनले उक्त मुद्दा पोखराको उच्च अदालत बाट जितिसकेका थिए तर अहिले आएर फेरि पनि नेपाल टेलिकमले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
त्रीपाठीले आफ्नो सामाजिक संजाल फेस्बुकमा लेख्दै यसो भनेका छन:
“मलाई बि’पक्षी बनाई, नेपाल टेलिकमले फेरी स’र्वोच्च अदा’लतमा मु’द्वा दायर गरेको छ । उ’च्च अ’दालत पोखराबाट हारेपछी, टेलिकम अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । नेपाल टेलिकम लगायतका सबै कार्यालयहरु जनताप्रती उत्तरदायी हुनुपर्छ र समयमा नै सेवा दिनुपर्छ भन्ने बिषय स्थापित गर्न खोज्दा, टेलिकम हात धोएर लागेकै छ ।
झण्डै ३ बर्ष देखीको यो प्र’करण अझै सुल्झीएको छैन । यो मुद्वा आम सेवाग्राही जनताको हो । मैले त प्र’तिनिधित्व मात्र गरेको हु । ठिकै छ । म तयार नै छु, टेलिकमजी !
तपाईं कसको पक्षमा हुनुहुन्छ? टेलिकमको लापर’बाहीलाई पर्दा’फाँस गर्नु गल’त थियो र? अनि मु’द्दा नै जिति सकेका त्रीपाठीलाई किन पुनः मु’द्दा दायर गरियो? सबैले मिलेर सत्यलाई साथ दिऔं । का’नुनले सत्यला’ई साथ देओस भनी कामना गर्दछौं । यो समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ भने अपिल त्रीपाठीको समर्थनमा सक्दो शेयर गर्नुहोला ।
देश र जनताको लागि बोल्ने हर नेपाली माटोले जन्माएका सन्तान लाए पटकपटक राज्यले दु,ख दिनु, उचित हैन,जनताको भावना संग खेल,वाड गरे,राज्यको उच्च अहोदामा बस्ने मानिसको जिन्दगी जनताले माटोमा मिलाउने छन्,,
बिहानै पाथिभरा भगवानको दर्शन गरि, तपाईंको भाग्य हेर्नुस्
भागबन्डा मिलेपछि तीन बिश्वबिद्धालयले उपकुलपति पाए
अर्थमन्त्री खतिवडाको ‘काउन्टडा`उन’ सुरु, ७२ घण्टामा पदमु`क्त हुने
ओलीकै पालामा देशले कोल्टे फेर्छ: गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा
अनसनरत डा.केसीका मागहरु सम्बोधन गर्न वार्ता सुरु भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ